December 2020 - Channel Lover
December 29, 2020 by Channel Lover
ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။ ကျုပ်က ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ဝေတနာရှင်ဗျ။ ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ့်ဝေတနာကို ကိုယ့်ဖာသာ မှန်းကု ရမ်းကု ဒေါက်တာရမ်းကုလုပ်ရင်းရရှိလာတဲ့အကျိုးကို မျှဝေလိုက်တာ။ ဒီလိုဗျ …၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျုပ်အံသွားတစ်ချောင်းလှုတ်ပြီး မခံမရပ်ကိုက်လွန်းလို့ ဆရာဝန်သွားပြတယ် ။ ဆရာဝန်ကသွားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ မနုတ်စေချင်ဘူး စားဆေးပေးပြီးထိန်းလိုက်တယ်။သက်သာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားရဲ့ဘေးမှာဖုကလေးလိုဖြစ်ပြီးပြီတည်လာတယ်။ဆရာဝန်ထပ်ပြ ဆေးထပ်ပေး ဒီလိုနဲ့ပဲသံသရာလည်နေတာပေါ့။ ပြီတည်တဲ့အခါ သွားဖုံးတင်းပြီး နေထိုင်ရခက်ပေမယ့်ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ပြီထွက်သွားရင် တစ်ပါတ်လောက်နေထိုင်လို့ကောင်းသွားပြန်ရော။ ပြီးရင်ပြန်ထွက်။ဆေးကတော့ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်နေ့တိုင်းသောက်လာလိုက်တာ ၂၀၁၇မှ၂၀၁၉ခုနှစ်ခုချိန်ထိပဲ။ နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။နှစ်ချီကြာလာတော့ ကင်ဆာဘာညာလန့်လာင်္ပြီလေ။ရန်ကုန်ရောက်တော့ လှည်းတန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြတယ်။ ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေး အဖြေက ကင်ဆာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ စိတ်အေးပြီမို့ဆက်ကုပေါ့။သက်သာသလိုရှိပေမယ့် အနာပြီထွက်တာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တင်းပြီလေ။ လူကခတ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့တွေ့သမျှ လမ်းဘေးအရွက်တွေခူး အရည်ထွက်အောင်ကြိတ် အနာထဲထည့်ပေါ့။ တမာရွက်တွေဝါး။ တမာခေါက်ငုံ။ ဆားရေငုံ မရပါဘူး။ တစ်နေ့ ဖုန်းပွတ်ရင်းကျောက်ချဉ်အာနိသင်အကြောင်းပင်စိမ်းရွက်နဲ့ သံပုရာသီးအကြောင်းရေးထားတာလေးတွေ့လို့ … Read more
ဆီးချို၊ သွေးချို ၊သွေးတိုး၊သွေးပြစ် ရောဂါဝေဒနာအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ ဟင်းရည် သွေးတိုး၊သွေးပြစ်၊ဆီးချို၊သွေးချိုအတွက်အမြဲသောက်သုံးသင့်သည့်ဆေးတော်ကြီး – ဟင်းရည် -၁။တကယ်ကိုဆေးစွမ်းထက်တဲ့ဟင်းရည်မလို့ ဆေးတော်ကြီးဟင်းရည်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ပါဝင်တဲ့ဆေးအမယ်တွေက လယ်ကန်စွန်းရိုးနီနဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို သမားတော်ကြီးနှစ်ဦးလို့ဆိုသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ဆရာတွေကတော့”ဝိဇ္ဇာညီနောင်”လို့ တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ ကန်စွန်းရိုးနီကသွေးအပြစ်ပြုတာတွေရှင်းလင်းကုသပေးပြီး ကင်ပွန်းချဉ်ကတော့သွေးတွင်းပိတ်ဆို့တာကိုရှင်းပေးပြီးဝမ်းကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြဖူးပါတယ်။ဆရာတွေပြောခဲ့သလိုတင်စားပြီးပြောပါ့မယ်။ ဒီဆေးဝိဇ္ဇာညီနောင်ဟင်းရည်ကိုစားကောင်းသလိုချဉ်ရည်ဟင်းချက်ပြီးထမင်းမစားမီဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်ကြိုတင်ပြီးဟင်းရည်တစ်ပန်းကန်ကြိုသောက်ထားရင်ဝမ်းထဲမှာပြည့်တင်းနေတဲ့လေတွေ ပြိုကဲပြီးအစာစားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်၊ ထမင်းစားနေစဉ်နဲ့စားအပြီးမှာသောက်ရင် လည်းသွေးပြစ်သွေးတိုးခြင်းနဲ့ဆီးချိုသွေးချိုတက်ခြင်းကင်းဝေးကာ စိတ်ကြည်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ မှတ်ချက်။ သွေးပြစ်သွေးတိုး၊ဆီချိုသွေးချိုတက်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအစာမကြေခြင်းဝမ်းချုပ်စမြင်းခံခြင်းများကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ဝမ်းချုပ်စမြင်းခံခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အစာစား နေစဉ်နှင့်စားပြီးပြီးခြင်းရိုးရိုးရေအေး၊ရေခဲရည် စသည်တို့ကိုလုံးဝမသောက်ပဲရှောင်ကြဉ်ကြပါရန် အကြံပြုပါ၏။အစားစားနေစဉ်ရေနွေးသင့်ရုံနှင့်ဟင်းရည်တဝသောက်၍ရပါသည်၊အစာစားပြီး ပါကအစာကြေစေရန်အညာထန်းလျက်အညို တစ်ခဲနှစ်ခဲကိုရေနွေးဖြင့်သောက်သုံးပေး ကြပါ၊ ရေအေးကိုမူထမင်းစားပြီးတစ်နာရီကျော်မှသာနည်းနည်းခြင်းသာသောက်ပါရန်။ ၂။ဤသို့ဆင်ခြင်ညဏ်ရှေ့သွားစားသောက်နေ ထိုင်ပြီးဝိဇ္ဇာညီနောင်ဟင်းရည်ကိုမှီဝဲသောက်သုံးသွားပါကသွေးပြစ်၊သွေးတိုး၊ဆီးချိုသွေးချိုဝေဒနာများနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲဝေဒနာများအတွက်ဆေးတိုးကာကျန်းမာလာနိုင်မည်ဖြစ်၍လယ်ကန်စွန်းရိုးနီကင်ပွန်းချဉ်ဆေးတော်ကြီးဟင်းရည်ခေါ်ဝိဇ္ဇာညီနောင်ဟင်းရည်ကိုသောက်သုံးသင့်ကြောင်းပါဗျာ။“ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Unicode ဆီးခြို၊ သှေးခြို ၊သှေးတိုး၊သှေးပွဈ ရောဂါဝဒေနာအတှကျ အစှမျးထကျတဲ့ ဟငျးရညျ သှေးတိုး၊သှေးပွဈ၊ဆီးခြို၊သှေးခြိုအတှကျအမွဲသောကျသုံးသငျ့သညျ့ဆေးတျောကွီး – ဟငျးရညျ -၁။တကယျကိုဆေးစှမျးထကျတဲ့ဟငျးရညျမလို့ ဆေးတျောကွီးဟငျးရညျလို့ချေါပါတယျ၊ ပါဝငျတဲ့ဆေးအမယျတှကေ လယျကနျစှနျးရိုးနီနဲ့ ကငျပှနျးခဉျြရှကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကို သမားတျောကွီးနှဈဦးလို့ဆိုသငျ့ပါတယျ။ကြှနျတေျာ့ဆရာတှကေတော့”ဝိဇ်ဇာညီနောငျ”လို့ … Read more
ပန်းနာရင်ကြပ် နဲ့ ချောင်းဆိုးသွေးပါ သမားတွေအတွက် လက်တွေ့ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်း ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ်ဆေးနည်းလေး မေးထားသူတစ်ယောက်အတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက်ရှာဖွေပြီး မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါ ….ချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစတွေကပါသေးတယ်။မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့။ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်း – အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည်….ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့်၊ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့် ၊ ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်၊အောက်မီးနှင့်ပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စား အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်…..။ Unicode ပနျးနာရငျကွပျ နဲ့ ခြောငျးဆိုးသှေးပါ သမားတှအေတှကျ လကျတှပြေ့ောကျတဲ့ ဆေးနညျး ခြောငျးဆိုးသှေးပါ ပနျးနာရငျကွပျဆေးနညျးလေး မေးထားသူတဈယောကျအတှကျ လကျလှမျးမှီသလောကျရှာဖှပွေီး မြှဝပေေးခွငျးဖွဈပါတယျ။ လကျတှပြေ့ောကျကငျးလို့စတေနာရှထေ့ားဆေးနညျးလေးပေးလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အမလေကျတှပေ့ါ ….ခြောငျးကတဟှတျဟှတျသှေးစတှကေပါသေးတယျ။မောလိုကျတာကလညျးဖိုထိုးနတေဲ့အတိုငျးပဲအသားရညျကလညျးညိုညဈညဈမခံစားနိုငျဘူးပေါ့။ကံကောငျးခငျြတော့ မိတျဆှတေယောကျရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမွဈပွတျပြောကျကငျးခဲ့ပါတယျ။ ဆေးနညျး – အိမျမှေးကွကျဥတလုံးထကျခွမျးခှဲ ပနျးကနျတလုံးထဲထညျ….ကွကျဥအခှံတခွမျးဖွငျ့နှမျးဆီစဈစဈထညျ့၊ကွကျသှနျဖွူ တလုံးအခှံနှာပါးပါးလှီးဖွူးထညျ့ ၊ ဒနျအိုးထဲရအေနညျးငယျထညျ့၊အောကျမီးနှငျ့ပေါငျးခဏနကေကျြပွီ တနသေုံ့းကွိမျစား အမွဈပွတျပြောကျကငျးကွောငျးသတငျးကောငျးပါးလိုကျပါသညျ…..။
လောကကြီးရဲ့ မှတ်သားဖွယ်ထဲက ဦးဇော်ဇော်ပြောပြလာတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား နဲ့ ကုသိုလ်
လောကကြီးရဲ့ မှတ်သားဖွယ်ထဲက ဦးဇော်ဇော်ပြောပြလာတဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား နဲ့ ကုသိုလ် ဦးဇော်ဇော်ကတော့ ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ကြိမ်မှာ ဦးဇော်ဇော်ဟာ မှတ်သားဖွယ် စကားကို ဆိုလာတာပါ။ဦးဇော်ဇော်က “ကောင်းသတင်းကိုသာ ကြားချင်ပေမယ့် အရှိတရားကလည်း ငြင်းပယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး နေ့စဉ် ကိုဗစ်ကြောင့် ဘဝတစ်ပါး ကူးပြောင်းသွားရသူတွေရှိနေပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ မညည်းမညူဘဲ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ ထိန်ပင်က စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေကို တွေ့ဆုံပြီး တော့ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းကောင်းတွေ ကြားရပေမယ့် အချိန်တိုတစ်ခု စောင့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မိဘဘိုးဘွား သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတွေကို သက်တမ်းစေ့နေနိုင်အောင် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာ အနစ်နာခံဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းသက်သာရာရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် … Read more
ယခုလာမည့်2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်👍🙏👍
December 22, 2020 by Channel Lover
ယခုလာမည့်2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်👍🙏👍 ဒီဇင်ဘာလအကုန် New Year အစ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ 1.1 2021 နေ့ဟာ သောကြာနေ့ကျပါသည် သောကြာဆိုတာ အအေးဓာတ်ကိုဆောင်ပါတယ် သောကြာဂြိုလ်တိုင်ဟာ ပူးမင်း ဖြစ်ပြီး အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို လိုလားတဲ့ အကောင်လေးပါ👍 သောကြာသားသမီးတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်သူတွေဖြစ်သလို ထူးချွန်ထက်မြက် ချမ်းသာကြသူတွေလဲ များပါတယ် ၂၀၂၁ ရဲ့ တနှစ်တာလုံးဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အေးချမ်း အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နမိတ်ပါ ၂၀၂၀ မှာ Covid ကြောင့် ပူလောင်ခဲ့ရတာတွေဟာ ၂၀၂၁ မှာ အားလုံးပြီးဆုံးအေးချမ်းကြမဲ့ သဘောပါ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဟာ စနေနေ့ကျတာ ဟာ ဗေဒင်နမိတ်အရမကောင်းပါဘူး ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်ကတော့ … Read more
ရုတ် တရက် အား အင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါ “
December 18, 2020 by Channel Lover
ရုတ် တရက် အား အင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါ “ အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်” အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (1) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ (2) သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ (3) သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေ ပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ။ သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့ သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ် ။ အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Creditvia. sai min thant မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေသည် Aung Myat Zaw( ကျောက်ဆည်) unicode ရုတျ တရကျ အား အငျကုနျခမျးသလိုဖွဈနပွေီး၊ မူးဝသေလို၊ အိပျရမေဝသလိုဖွဈနရေငျ ဒီနညျးလေး စမျးသုံး … Read more
December 17, 2020 by Channel Lover
သင့်နှလုံးလမ်းကြောင်းကပြောနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကြောင်း(အရမ်းမှန်တယ်နော်) ၁။ သင့်နှလုံးလမ်းကြောင်းဟာ ပုံ(၁) မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဆိုရင်တော့ သင်ဟာရည်မှန်းချက်သိပ်ကို ကြီးမားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး အမှီခိုကင်းကင်း ရပ်တည်ချင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ ပြတ်သားခိုင်မာတယ်။ ဘဝကိုလက်တွေ့ကျကျ ရှုမြင်တတ်ပြီး အနည်းငယ် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တယ်။ သို့ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော့ သိပ်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ လူသားတစ်ဦးပါ။ ၂။ သင့်နှလုံး လမ်းကြောင်းက ပုံ (၂)မှာ ပြထားသလိုဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ဖက်သားအပေါ် ကြင်နာတတ်ပြီး ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ခံစားရမှာစိုးလို့ နှလုံးသားကို အသာလေး သော့ခတ် သိမ်းထားချင်သူပါ။ ၃။ သင့်နှလုံးလမ်းကြောင်းက ပုံ (၃) မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အပြင် … Read more
ကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစု နေ့စဉ်မပါမဖြစ်စားသုံးနေတဲ့ အချိုမှုန့်ကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားသလဲ?….
ကျွန်တော်တို့မြန်မာအများစု နေ့စဉ်မပါမဖြစ်စားသုံးနေတဲ့ အချိုမှုန့်ကို ဘာနဲ့ လုပ်ထားသလဲ?…. ရေရှည် မှန်မှန် စားသွားရင် ဒီလောက် အန္တရာယ် များပါတယ် ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့်ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး စားစရာထဲ ထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအသောက်တွေရဲ့ အရသာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွားတိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်ဟာ ဟင်းခတ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဟုတ်ပါသလား.? ပုံမှန်သုံးသင့်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ပါ။ နည်းနည်းစားစား များများစားစား ရေရှည် စားရင် အန္တရာယ်ကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှင်များက ပြောကြားပါတယ်။ Good Manufacturing … Read more
ပဲပွုတျလေးနဲ့နစေ့ဥျလှူပွီး နတျပွညျမှာဗိမာနျရှိပွီးသားဖွဈနတေဲ့ အဖှား
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ယခုပွောပွပေးမယျ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ အရမျးကိုမှ ထူးခွားပွီး အံ့သွဖှယျကောငျးလှတဲ့ အဖှားတဈယောကျရဲ့ ကုသိုလျထူး အကွောငျးလေးပါ။ ဒီအကွောငျးရငျးရဲ့ အစမှာတော့ ပဲခူးတိုငျး ညောငျလေးပငျမွို့ရဲ့ ဆေးရုံပျေါမှာ သကျတျော( ၈၉ )နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆရာတျောကွီး ဦးဇာဂရဟာ နာမကနျြးဖွဈလို့ ဆေးရုံကွီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူရာ ကနေ တဈနေ့ မှာတော့ သတိလဈမမွေ့ော သှားခဲ့ပါတော့တယျ ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောဟာ အိမျမကျမကျသလို ဖွဈနပွေီး “အငျး ငါ ဘယျကိုမြား ရောကျနတောပါလိမျ့ ။ ဧကန်တ ငါအခု နတျပွညျကို ရောကျနတေယျ ထငျပါရဲ့ဆိုပွီး ။” သူ့ဗိမာနျနဲ့သူ စောငျးငွှငျး ပတျသာ တူရိယာတှေ ကခုနျ တီးမှုတျ နလေိုကျကွတာ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတျောဟာ ဗိမာနျကွီးတဈခု တှသှေ့ားခဲ့တယျ။ … Read more
ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်လျှင် ဘယ်လိုကပ်ရသလဲ ? (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဖတ်သင့်ပါတယ်နော် )
ဗုဒ္ဓဘာသာအများရဲ့ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုက ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင်သလိုမျိုး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဆိုတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ရဲ့ အိမ်မှာဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ထမင်းပန်းကန်လေးပေါ်မှာ သကြားလေးဖြူ၊ ထန်းလျှက်လေးနဲ့ တင်ထားတာကိုပါ။ အိမ်မှာ စားစရာမရှိလို့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီသကြား၊ ထန်းလျှက်တွေနဲ့ စားနေရလို့ဆိုရင်တော့ အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်စားနိုင်တာ၊ ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူထားပြီး ဘုရားရှင်ကိုလည်း မရှိရှိတာ ကပ်တဲ့သဘောပါ။ ခုဟာက အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။မကပ်နိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်စားတဲ့အခါ ဟင်းသုံးလေးမျိုးနဲ့ စားနေပြီး ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တဲ့အခါမှာသာ အဲလိုတင်တာပါ။ တမင်တကာ … Read more